Aliexpress, yakavimbika here? Isu tinokupa makiyi kuti uzive | ECommerce nhau
Izvo zvinokwanisika kuti, kana uchitsvaga chigadzirwa, kanopfuura kamwechete iwe wasangana neAliexpress. Iyo ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzekutengesa, pamwe neAmazon Zvisinei, kuchine vanhu vazhinji vanozeza kutenga kubva kwazviri. Uri kushamisika kana Aliexpress yakavimbika?
Kana usati wambotenga kare, kana kuti wakasangana nezvakashata uye uchifunga kuti hazvina kukosha, saka tinoda kupindura newe pane zvakanaka nezvakaipa zveAliexpress kuti iwe ugone kuziva kana ichivimbika kana kwete uye, pamusoro zvese, kuitira kuti kana iwe ukatangisa kutenga iwe gara uchizviita uine garandi iri pakati. Totanga here?
1 Chii chinonzi Aliexpress
2 Aliexpress, yakavimbika here?
3 Tenga paAliexpress zvakachengeteka
3.1 Usagare neyekutanga chigadzirwa chinowanikwa mune yekutsvaga injini
3.2 Tarisa maonero
3.3 Paunenge uchibhadhara, bheji paPayPal
3.4 Dzimwe nguva irikuedza rombo
Chii chinonzi Aliexpress
Aliexpress yakavambwa senge online yekutengesa chikuva muna 2010 naJack Ma, muvambi wake. Chinangwa chaive chemakambani madiki kuChina, nekune dzimwe nzvimbo, kuve nekuvapo paInternet uye kugona kupa zvigadzirwa zvavo kune vese vekunze uye vekunze vatengi. Dzimbahwe iri muHangzhou, People's Republic of China, uye nderake reAlibaba Group.
Muna Gumiguru 2019, Aliexpress yakazivisa kuti yaive nezvigadzirwa zve1000 bhiriyoni zvinotengeswa papuratifomu yayo yepamhepo, uye pamusoro pemakore apfuura zvave kungangoita kuti nhamba iyi yawedzera zvakanyanya.
Zvakare, kana iwe usingazive, izvozvi Aliexpress ine panyama yekutengesa kuSpain. Haisi yekutanga chete kuSpain, asi muEurope. Inowanikwa muMadrid, kunyanya mu Shopping Resort, iyo Int Xanadú Shopping Center. Unogona kuenda ikoko kana uchigara mukati kana kumativi eMadrid uye unoona zvigadzirwa zvavanotengesa, kana iwe unogona kunyange kutenga zvimwe zvigadzirwa kubva kuchitoro chavo chepamhepo ipapo.
Mushure mezvatakakuudza nezve Aliexpress, hapana mubvunzo kuti rakavimbika. Asi pane nguva dzose nuances iwe yaunofanirwa kufunga nezvayo. Uye ndeyekuti Aliexpress haisi chitoro pachayo, asi nzvimbo ine vatengesi vazhinji inosanganisirwa. Izvo zvakafanana neapo iwe paunotenga kubva kune wekunze Amazon mutengesi, chete, mune ino kesi, ese iwo (kana angangoita ese) akafanana akadaro.
Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuwana vatengesi vakanaka uye vakavimbika, kana iwe unogona kusangana nevamwe vasina kukutumira iwe chigadzirwa. Kana ivo vanoisa izvo zvaunoda pamitengo yekutenga uyezve ndokukumbira iwe kukanzura nekuti vakakanganisa.
Kazhinji kutaura, tinogona kukuudza kuti Aliexpress yakavimbika. Ine simba rayo, sezvo uri iwo mutengo wezvigadzirwa, zvakachipa kwazvo mune mazhinji acho, uye zvakasiyana; asiwo poindi dzayo dzisina kunaka, sekumirira, uko dzimwe nguva kunoreba, kana kushomeka kwevimbiso pane zvigadzirwa zvehunyanzvi (kunyanya kana uchifanira kuzvitumira kuChina kana kune imwe nyika kuti zviongororwe).
Iwe zvakare une Aliexpress vimbiso. Uye ndezvekuti kudzamara iwe uchipa chiziviso chekuti wagamuchira chigadzirwa paAliexpress havaregedze muripo wevatengesi, uye kana paita dambudziko vanowanzotora mutoro wechinetso vogadzirisa maakaundi nemutengesi, asi kana vagadzirisa zvese kwauri.
Saka hongu, kutenga paAliexpress kwakachengeteka. Asi kuti uzviite nemazvo, unofanirwa kuita "sarudzo" diki uye mashoma maitiro kuti uve nechokwadi chekuti chaunotenga hachisi chemhando yepamusoro, kana kunyepa, kana chakaipa. Iwe unoda kuziva sei?
Tenga paAliexpress zvakachengeteka
Kana isu takatokuudza kare kuti Aliexpress yakavimbika, ikozvino isu tinofanirwa kukuyambira kuti haugone kuenda zvishoma paunenge uchitenga; zvakatonyanya kana chiri chinhu chakakosha kwazvo.
Sa "vatengi" paAliexpress, iwo madhiri atishandira kuti tidzivise matambudziko, uye kana isu takaagadzirisa nepese patinogona napo pachedu, tine zvinotevera:
Usagare neyekutanga chigadzirwa chinowanikwa mune yekutsvaga injini
Paunoenda kunotsvaga chigadzirwa paAliexpress, kana chiri chinhu chine fashoni uye icho vanhu vanoda, iwe unowana vatengesi vazhinji nezvigadzirwa izvozvo (uye chenjera, vatengesi vazhinji vakafanana, chete ivo vane zvitoro zvakasiyana). Izvi zvinoreva kuti kune yakawanda yemitengo yakasiyana.
Kurudziro yedu ndeyekuti isa injini yekutsvaga kunyora zvigadzirwa kubva kudhura kusvika kudhura (pasina kutumira). Tevere, sarudza vashoma vatengesi vaunogona kufunga kuva nemitengo yakachipa.
Paunenge iwe wasarudza ivo vatengesi, inguva yekuvaongorora. Ivo havana chaizvo chitoro chemuviri, asi chaicho chimwe, saka unofanirwa kutevedzera maonero avanayo. Mupfungwa iyi, tungamirirwa nenyeredzi. Imwe ine nyeredzi mbiri haina kufanana neiyo ina 5. Kana isu hatikuudze iwe kuti iwe unogara uchisarudza iyo ine mashanu, asi iyo iri padyo nemufananidzo iwoyo uye ine yakakwana yekutengesa yakaitwa (pese pazvinogoneka).
Sei? Zvakanaka nekuti pachave maonero evamwe vatengi vakatenga zvigadzirwa. Saka iwe uchafanirwa kuverenga zvishoma kuti uone kana icho chigadzirwa chinosvika chakaringana kana kwete, kana chiri chehunhu, kana chiri chakakodzera icho ...
Paunenge uchibhadhara, bheji paPayPal
Kana iwe uine Paypal, uye iwe uchigona kubhadhara nayo, zvese zvirinani. Tinorikurudzira nekuti ichi chivimbiso chekuwedzera. Kwete chete kuti une Aliexpress seyakavimbika, asi zvakare une PayPal pakati, uye kana mumwedzi miviri (kana pamberi) usati wagamuchira mubhadharo, unogona kutora zvese Paypal uye Aliexpress.
Nenzira iyi, kune rumwe ruoko kana kune rumwe rutivi, ivo vanozogadzirisa dambudziko rako uye iwe unozodzosera mari yako mune dzakawanda kesi (hongu, iwe unofanirwa kupembedza chikonzero nei iwe uchida mari yako kudzoka uye kuratidza kuti chigadzirwa kana kwete iwe wagamuchirwa, kana zvisiri izvo zvawanga uchida).
Dzimwe nguva irikuedza rombo
Hatigoni kubatsira kukuyeuchidza. Aliexpress yakavimbika, hongu, asi dzimwe nguva unofanirwa kutora njodzi kutenga chigadzirwa. Ngozi ndeyekuti iwe hauzive hunhu hwezvaunotenga, zvirinani kusvika zvasvika kwauri; Uye iwe urikutengawo chimwe chinhu chingangotora mwedzi kana kupfuura kuti usvike, uye haudi icho kana chiri mari yakakwana inogona kukutyisidzira zvishoma.
Asi izvo pane vimbiso, uye nekuita chokwadi chekuishandisa isati yasvika nguva yekupedzisira (kungave kuri Aliexpress kana pa PayPal kana ukaishandisa) hapana chinofanira kuitika.
Iye zvino iwe unofanirwa kungoita yako yekutanga odha uye edza chiitiko kana usati watoita saizvozvo. Une mimwe mibvunzo yatinogona kugadzirisa iwe? Bvunza isu!
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Aliexpress, yakavimbika here?